Fandraisana anjaran’ny Rising Voices tamin’ny One Day on Earth (Andro iray eto an-tany) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Novambra 2010 4:58 GMT
Mpitoraka bilaogy roa avy amin'ny tetikasa Rising Voices no nandray anjara tamin'ny tetikasa One Day on Earth (Andro iray eto an-tany) vao tsy ela izay. Ny tanjon'ny tetikasa dia ny hanangona fandraisana anjara miendrika horonantsary na sary manerana izao tontolo izao mba hanome fijery malalaka ny fiainana eto an-tany mandritra ny andro iray, 10 Oktobra 2010. Ireto ny fandraisana anjara miaraka amina fanazavana ambangovangony avy amin'ny mpitoraka bilaogy roa ao amin'ny tetikasa Rising Voices Foko sy Exploring Taboos.
Ao amin'ny tanànan'Antananarivo, i Lalatiana Rahariniaina dia naka horonantsary momba ny tsena sy ny fitateram-bahoaka rehefa Alahady maraina. Ny horonantsariny dia noravahana ny mozikan'ny namany Olombelo Ricky, izay nanome alàlana azy hampiasa ny hirany.
Ao amin'ny bilaoginy DagoTiako, dia manazava fohifohy izy mikasika ny zavatra niainany tamin'ny fanaovana ny horonantsary ho an'ny tetikasa.
Alahady maraina ny andro; ny ankamaron'ny tranombarotra sy toeram-piasana dia nikatona avokoa. Tsy te handeha tany am-piangonana aho niaraka tamin'ny “jeans”-ko sy ny “tennis”-ko. Nisy fotoana fohy nieritreretana dia… “Ao izany!”, misy tsena foana na Alahady aza. Tsy nankasitraka ny handehanako eny ny vadiko. Afaka maminaviana ianareo, tsy tsara ho an'ny tenako sy ny fakantsariko izany. Fa satria izaho mafy loha, dia nidina teny an-dàlambe ary namonjy ny tsena ihany. Mazava ho azy fa tsy namela ahy ho irery akory ny vadiko, nanapa-kevitra izy nony farany fa ho “mpiaro” ahy 😀 (Mahafinaritra ny vadiko e? 😉 ). Na izany na tsy izany, afaka nanatontosa ny horonantsary aho, olona vitsy ihany tamin'ireo izay nifanena tamiko teny an-dàlana no niahotra tamin'ny tetikasa, fa dia mankasitraka indrindra ireo mpivarotra teny amin'ny tsenan'ny Behoririka aho, ny mpamily ny fiara fitateram-bahoaka, ny mpanampiny ary ny mpandeha rehetra izay nanaiky am-pifaliana ho ao anatin'ny horonantsary.
Ny fandraisana anjara faharoa dia avy any Nawara Belal ao amin'ny tanànan'i Cairo, Ejipta. Izy sy ny namany dia nitantara sary nalaina tamin'ny 10 Oktobra 2010. Ny votoatin'ny horonantsary dia ny zon'ny vehivavy any Ejipta, ary dia mifameno amin'ny lohahevitra maro izay soratany ao amin'ny bilaoginy Nooning [ar/en] izay anisan'ny tetikasa Exploring Taboos. Nanazava izy fa ny tsirairay amin'ireo vehivavy telo dia samy mitazona ny heviny manokana mikasika ny fahalalahan'ny tsirairay sy ny zo amin'ny fahafahana milaza hevitra ao amin'ny firenena. Izy dia manoratra:
Ny vehivavy voalohany dia vehivavy tsy manambady mipetraka amina tokantrano mitokana ao amina tranobe iraisana, manana fanantenana be na dia toa tsotra aza ny teniny, izy dia vehivavy manahirana fotsiny izao.
Ny vehivavy faharoa dia manambady, miara-mipetraka amin'ny zanany lahy tanora 2 ao amina tokantrano mitokana ao amina tranobe iraisana, izy dia naniry hatrany mihoatra noho izay efa naseho azy ary izy dia miasa mafy mba hahazoany izany.
Ny vehivavy fahatelo no zokiny indrindra, manambady ary mipetraka miaraka amin'ny zanany sy ny vadiny amina tokantrano mitokana ihany koa ao amin'ny tranobe iraisana. Azonareo antsoina hoe lamaody antitra [Avy amin'ny mpandika: ny ho ‘lamaody antitra’ na koa hoe ‘antitra fisaina’ dia entina milaza ireo heverina ho tsy maharaka ny vaninandro iainany] izy fa izaho dia mahita vehivavy tena olon'ny fo ao aminy.
Roa fotsiny ihany ao anatin'ny maro manerana izao tontolo izao ny fandraisana anjara tahaka ireo, ary ny sasany amin'ireo dia ho ampiasaina amina horonantsary fanadihadiana izay ho atambatry ny mpikarakara ny tetikasa. Ny santionany efa natao dia mampiseho ohatra amin'ny sary sasantsasany nalefa manerana izao tontolo izao.
One Day on Earth – 1st week teaser avy amin'ny One Day On Earth ao amin'ny Vimeo.